पूरा फिल्म Archives | साहित्यपोस्ट
साहित्यपोस्ट	 ९ आश्विन २०७८ १४:०१ 0
तीन मिनेटको छोटो फिल्म हेर्न तपाईं तयार भएर बस्नुहोस् । यो छोटो फिल्मले तपाईंलाई जीवनको पाठ मात्र पढाउँदैन, मनमा एउटा रमरमी पनि छाडेर जानेछ । वर्षा गराउने देवी र उनकी छोरी खेलिरहेका छन् । यत्तिकैमा बादल सानी बालिकासँग रत्तिन्छन्,…
हेर्नुस् आठ मिनेट छोटो अस्कर विजेता फिल्मको जीवनदर्शन
१९ असार २०७८ १८:०१ 0
मानिसको जीवन के हो ? एउटा गोलो चक्काजस्तो त हो ! मानिसको जीवन कुमालेको चक्रजस्तो त हो ! मानिस जन्मन्छ, हुर्कन्छ, वृद्ध हुन्छ । मानिसको जीवन छुटेकाहरूको सम्झनाको पुञ्ज त हो ! यस्तै यस्तै अर्थ बोकेको सन् २००० मा बनेको छोटो एनिमेटेड…
तुर्गनेभलाई समर्पित गरिएको एउटा ‘अश्लील’ फिल्म
१२ असार २०७८ १३:३७ 0
इभान तुर्गनेभले पहिलो उपन्यासबाट नै चर्चा पाए । सन् १८५६ मा प्रकाशित रूडिन उपन्यासले त्यो बेलाको बौद्धिक जमातलाई आकर्षित गर्न सफल भयो । तर जब उनले सन् १८६० मा फस्ट लभ लेखे, केही विवाद, असन्तुष्टि र आलोचना उनले झेल्नु पर्यो ।…
आफ्नै फिल्म हेरेर मिल्खा सिंह किन रोए ?
१२ असार २०७८ १२:०१ 0
प्रख्यात भारतीय एथलेट मिल्खा सिंहको गएको साता १८ जुनमा ९१ वर्षको उमेरमा निधन भयो । उनलाई कोभिड १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिका कारण अस्पताल लगिएको थियो । त्यहीँ चिकित्सकहरूले उनको मृत्यु भएको जानकारी गराए । उनलाई सन् २०१३…
५ असार २०७८ २२:२१ 0
गएको बुधबार आमिर खानद्वारा अभिनित तथा आशुतोष गोवारिकरद्वारा निर्देशित फिल्म लगानको प्रथम प्रदर्शनको २० वर्ष पूरा भएको छ । यस फिल्मले आमिर खानलाई एउटा असल फिल्म अभिनेताका रुपमा मात्र स्थापित गरेन, एउटा असल फिल्म निर्माताका रुपमा समेत…
(फिल्म चर्चा): लामो कथा तर छोटो फिल्म
५ असार २०७८ २०:२६ 0
सहज जीवन यापन कसलाई पो मन नपर्ला ! सधैँको खतरा, सधैँको अनपेक्षित जीवन कसैलाई पनि मन पर्दैन । तर जीवनमा सधैँ सरल, सहजता खोज्दा मानिसले बाँच्न बिर्सिरहेको छ । जीवन्तता भुलिरहेको छ । सन् २०१७ मा चिलीमा बनाइएको यो छोटो फिल्मले हामीलाई…